छवि र शिल्पाको खोजीमा प्रहरी, कहाँ छन् उनीहरु ? यस्तो छ प्रहरीको बयान – ताजा समाचार
छवि र शिल्पाको खोजीमा प्रहरी, कहाँ छन् उनीहरु ? यस्तो छ प्रहरीको बयान
काठमाडौँ : बहुविवाहको मुद्दा परेपछि निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल फरार छन् । उनीहरूविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको प्रहरीले खोजतलास गरिरहेको छ । जेठी श्रीमती हेमा ओझाले दुवै जना विरूद्ध बहु विवाहको उजुरी हालेकी थिइन् । उजुरीपछि उनीहरू विरूद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै दुवैजना फरार हुन् ।
दुई सन्तानकी आमा हेमाले साउन ५ गते महानरीय प्रहरी वृत्त गौशलामा बहुबिबाहको उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। उनको उजुरी यतिबेला महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र कालिमाटीमा छ । काठमाडाै‌ जिल्लाभरका बहुबिवाह सम्बन्धी उजुरीहरु कालिमाटीले हेर्छ । उनले हालेको उजुरीमा पहिला प्रमाण नभएको र हाल प्रमाण प्राप्त भएकाले श्रीमान र कान्छी श्रीमती शिल्पाबिरुद्ध बहुविवाहको मुद्धा हालेको उल्लेख थिइन् ।
छवि र हेमाबीच २०४१ सालमा विवाह भएको थियो। उनले छवि र शिल्पा दुबैलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन् । श्रीमान छविराज ओझाबिरुद्ध शिल्पाले प्रहरीमा घरेलु हिंसा भएको भन्दै उजुरी गरे पछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । लगतै शिल्पाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा डिभोर्सका लागि निबेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
उनीहरू दुवैजना प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको र खोजीकार्य जारी रहेको महिला तथा बाल बालिका सेवा केन्द्र कालिमाटीले जनाएको छ । पक्राउ गर्न सबै प्रहरी सर्कललाई जानकारी गराइएको र नियन्त्रणमा आए पछि मात्रै आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ । गत भदौंबाट लागू भएको नयाँ कानुनमा श्रीमती हुँदा हुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।
बहु विवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । निर्माता छविराज ओझाकी पहिली श्रीमती हेमाले महा नगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा छवि र शिल्पा विरुद्ध बहु विवाहको उजुरी दिएकी थिइन् ।